काठमाडौं । देशभर शुक्रबारको मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बदलीका कारण केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने मौसमविदले बताएका छन् । देशको पश्चिम तथा पूर्वी भेगका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। आज रात...
बसमा छुटेको २ लाख सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता
कास्की । बसमा छुटेको नगद २ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित रकमधनीलाई फिर्ता गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका-३३ बस्ने शान्ति पाध्यालाई बुधबार उक्त रकम फिर्ता गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो । पोखरा महानगरपालिका-२ बाग्लुङ बसपार्कबाट बागमारातर्फ जाँदै गरेकाे ना ६ ख ८४१२ नम्बरको यात्रुबाहक बसमा द...
वर्षा र पहिराले सडक सम्पर्क टुट्यो
बलेवा । केही दिनदेखि परिरहेको निरन्तर वर्षासँगै गएको पहिरोका कारण बागलुङका ग्रामीण सडक ठाउँठाउँमा अवरुद्ध भएका छन् । मङ्गलबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जिल्लाको दक्षिणमा रहेको बरेङ गाउँपालिकासँगकोे सडक सम्पर्क टुटेको छ । जिल्ला सदरमुकाम र छिमेकी गाउँपालिका तथा नगरपालिका जोड्ने सडक प...
तनाव कम गर्न गहन विश्रामको अभ्यास
एजेन्सी । आजभोलि अध्ययनदेखि जागिरसम्म, जहीँतहीँ छ, प्रतिस्पर्धा । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक र तनावपूर्ण वातावरणका कारण हाम्रो स्वास्थ्यमा समेत यसले असर पुर्‍याइरहेको छ । यस्ता नकारात्मक मानसिक भावनाले हामीलाई निरास र उदासी बनाइरहेको छ । यद्यपि, हामीभित्र रहेको तनाव व्यवस्थापनका लागि...
विपत्तिले विचल्ली, संवेदनाहीन व्यवहार र जोखिम न्यूनीकरणको सचेतना
बाढी, पहिरो र डुबानमा परे गत वर्षभरी भएको मानवीय क्षति यस वर्षको एक हप्तामा नै भएको छ । गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बुधबारसम्म बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १०८ जना पुगेको छ । अझै केही बेपत्ता छन् भने सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन् । मौसम पूर्वानुमान शाखाले परिवर्तित वाता...
विद्यालयमै प्याड पाएपछि छात्राको नतिजामा सुधार
दुर्गा देवकोटा कैलाली । कैलालीका सामुदायिक विद्यालयले छात्रालाई महीनावारी भएका बेला आवश्यक पर्ने प्याडको विद्यालयमै व्यवस्था गरेपछि छात्राको नतिजामा सुधार आएको छ । महीनावारीका बेला आवश्यक प्याड अभावमा धेरै छात्राले कक्षा छाडेर घर जाने गर्थे । छात्रा कक्षा छाड्ने दर घटेपछि छात्राको नतिजामा स...
बालविवाहलाई स्थानीय तहकै वैधानिकता !
हुम्ला । हुम्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा अझै बालविवाह हुने गरेको छ । उमेर नपुग्दै सानै उमेरमा बालबालिका प्रेममा परेर विवाह गर्ने पाइएको छ । जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको सर्केघाड गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष ट्यारे रोकायाले बालविवाहलाई वैधानिकता दिएका छन् । सर्केगाड गाउँपालिका–८ का १...
गोपनीयता कमजोर भएको भन्दै फेसबुकलाई कारबाही, अहिलेसम्मकै उच्च जरिवाना
एजेन्सी । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई ५ अर्ब डलर जरिवाना तिराएको छ । फेसबुकले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने अमेरिकी अधिकारीले बताएका हुन् । अमेरिकाको संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी)का अनुसार फेसबुकको गोपनीयता व्यवस्थापन कमजोर भएकाले ५ अर्ब डलर जरिवाना गरिएको हो । य...
नेपाल प्रहरीका ४३७ इन्सपेक्टरको सरुवा (सूचिसहित)
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले ४३७ प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)हरूको सरुवा गरेको छ । उनीहरूको २०७६ साल साउन महिनादेखि तलब, भत्तासमेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट खाने पाउनेगरी सरुवा गरिएको हो । सरुवा हुनेको नामसहित
एक जोर जुत्ताको मूल्य चार करोड ८० लाख !
बीबीसी । नाइकीको सह-संस्थापकले डिजाइन गरेको एक जोर ऐतिहासिक जुत्ता चार करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। त्यो न्यूयोर्कको एक लिलाममा राखिएका खेलकुदमा प्रयोग हुने १०० जोर जुत्तामध्येमा बिक्री हुने अन्तिम जोर जुत्ता हो। सन् १९७२ को नाइकी वाफल रेसिङ फ्ल्याट मुन नामको जुत्ताले एक लाख ६० हज...
बेलायतको मन्त्रिमण्डल : भारतीय गृहमन्त्री, पाकिस्तानी अर्थमन्त्री
लण्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले भारतीय मूलकी प्रिति पटेललाई गृहमन्त्री बनाएका छन् भने पाकिस्तानी मूलका साजिद जाविदलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । यसअघि जाविद गृहमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री जोन्सनले बुधबारमात्रै कार्यभार सम्हालेका हुन् । त्यस लगत्तै उनले नयाँ मन्त्री मण्डल गठन गरेका...
लमजुङ बाढी : चारजनाको मृत्यु, ६ जना अझै बेपत्ता
काठमाडौं । लमजुङको दोर्दी खोलामा बुधबार आएको बाढीले चारजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका मध्ये २ जनाको सनाखत भएको छ । सनाखत हुनेमा पर्साका आन्दाजी २८ वर्षीय शिवधन चौधरी र डडेलधुराका आन्दाजी ३४ वर्षीय रमेश बुढा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बेपत्ता भएका मध्ये एक जनाको लुकेर बसेको अवस्थामा सकुशल उद्...